Umthandazo kuLazaro oNgcwele oMangalisayo. ? Abagulayo, izinja kunye neMpilo
Umthandazo kuLazaro oNgcwele eyaziwa kususela kumaxesha akudala njengoncedo olukhulu lwamahlwempu, abagulayo kunye nezilwanyana. I Umthandazo kuLazaro oNgcwele Kusisixhobo esinamandla esinikwe sona kwaye ngokholo sisebenzela imimangaliso yamandla ngokoko sikufunayo.
Ngokuhamba kwexesha uye waba ngumxhasi kunye nomhlobo omkhulu wabantu abathandana nabantu abatshatileyo kunye nabantu baseCuba abathi rhoqo ngonyaka, nge-17 kaDisemba badibane e-El Rincón ukubhiyozela uvuyo lokuzalwa komntu ungcwele ongummangaliso.
1 Umthandazo kuLazaro oNgcwele Ngubani uLuka uLazaro?
1.1 Umthandazo kuLazaro oyiNgcwele ngokungummangaliso
1.2 Umthandazo ka-Lazaro oGulayo
1.3 Ukuze izinja
2 Ngaba le ngcwele inamandla?
Umthandazo kuLazaro oNgcwele Ngubani uLuka uLazaro?
Kwilizwi likaThixo sifumana amaLazari amabini; umntu ogama lakhe kumzekeliso wesityebi kunye ne-lazarus apho uYesu acacisa izulu nesihogo.
U-Lazaro wesibini ngumntakwabo-Marta noMaría kunye nabani na protagonist yenye yezona zinto zibalulekileyo zikaYesu Emhlabeni, uvuko.
Kwinkolo yamaKatolika aba bantu babini bamanyene baba yinto enye kuba kunzima ukwahlulahlula kuba ngamnye kubo unokubaluleka okufanayo komnye.
Waziwa ngokuba ngumncedi omkhulu wezilwanyana ezikwisimo sokushiywa, enyanisweni ukholelwa ekubeni ungumkhuseli wezinja, kodwa oku kuyimveliso yokholo lomntu kuba i-saint inceda wonke umntu oyifunayo.
Ubalisa ibali awayehlala lona de wayeneminyaka engama-60 kwaye umzimba wakhe wangcwatywa a isarcophagus yenziwe ngamarble ukuba ngo-1972 yafunyanwa iintsalela zayo ngaphakathi.
Umthandazo kuLazaro oyiNgcwele ngokungummangaliso
NguLazaro oNgcwele, umhlobo kaYesu Krestu kunye nomntakwabo kunye nomkhuseli wabo babandezeleka!
Nina niyaziyo intlungu yokugula kunye nokutyelelwa kukaYesu Krestu, nibuvusile ubomi bakho eBethany, niyazamkela izibongozo zethu, xa sithandaza uncedo ngeli lixa lentlungu.
Thandaza kuBawo ongunaPhakade ukuze sibe nokuzithemba okukhuselekileyo kumandla kaYesu.
NguLazaro oMangalisayo, ovuswe ngamandla kaThixo kaYesu Krestu, siyakucela ngalo mzuzu ulusizi wokukhathazeka kwakho nangovuyo olungathethekiyo owalifumana xa uYesu wakuthumela ngala mazwi amnandi engcwabeni, ukuba uyongenelela kwi-Divine Master ukuze Ungenelelo lusinike esikuthandayo.
ICawa yamaKatolika yamkele esidlangalaleni amandla kaLazaro oNgcwele Kwaye unaye njengomnye wabangcwele abahlonelwayo elukholweni, ngoko ke sebenzisa ithuba lomthandazo wakhe.
Ngale ndlela sinokukuqinisekisa oko imithandazo oko kuphakama phambi kwetrone yakhe akulahlwa yimithandazo okanye izibongozo zililize kodwa endaweni yoko kube livumba elimnandi phambi kobukho bakhe kuthi ke impendulo yakhe ivele kuthi.
Ukwenza umthandazo ube ngumzuzu ofanelekileyo awuyenzelwanga, nangona kunjalo kubalulekile ukugxininisa ukuba eyona nto ingummangaliso yokwenziwa komthandazo kukusuka entliziyweni kwaye uqiniseke ukuba impendulo iza kuthi.
Ukuba ayenzwanga ngale ndlela ke azinangcaciso kwaye azinantsingiselo.
Umthandazo ka-Lazaro oGulayo
Usikelelekile uLazaro oGcweleyo, igqwetha lam, umkhuseli wam oyiNgcwele, ndibeka ithemba lam kuwe, ndibeka iimfuno zam, ixhala lam kunye noxinzelelo lwam, amaphupha am neminqweno, kwaye, ndazi imimangaliso emininzi esele yenziwe ngawe, ndisazi ukulunga okuvela ezandleni zakho xa ubuzwa ngokuthobeka nangokholo, namhlanje ndiza kuwe ndithandaza, ndicela uncedo lwakho olunamandla kunye nenceba.
Owu uLazaro osikelelekileyo, ngethemba lesithembiso esiphambili esenze ukuba intliziyo yakho ifikelele kwisithsaba sokufela ukholo, kwaye ngalo mnqweno ovuthayo wokunika ubomi bakho ngenxa yalowo uye wakunika kwakhona emva kokulahleka, ndinike uLazaro oNgcwele ozukileyo Mlo, thandazela iminqweno yam phambi koYesu olungileyo, umhlobo wakho, umntakwenu kunye nomncedisi, kwaye ndicele ukuba ngenceba yakhe engapheliyo andinike oko ndikucela ngentliziyo yam yonke, aze ke aphumle ekuphelisweni kwam kukuphelelwa lithemba.
(Thetha okanye ufuna ukwenza ntoni)
kwaye ukuba ucinga ukuba ayilunganga, ndinike uxolo nokuzola komphefumlo wam ukuze ndinethemba lokuba inzaliseko yobuThixo iyarhoxa.
NguLazaro oNgcwele, ubawo ozukileyo wehlwempu, ndiyakucela ungayeki ukundinceda, zibonakalise ukuba uyavuma njengoko uhlala usenza kwaye uthathe izicelo zam eNkosini ngokukhawuleza, ndinike iintsikelelo nenkuselo, ukhulule usizi neengxaki zam ususe ebomini bam bonke ububi notshaba .
NgoYesu Krestu, umntakwethu neNkosi.
Imithandazo abajongana nayo Imicimbi yezempilo ihlala ingxamisekileyo kwaye esi sisihloko apho amaxesha amaninzi kuphela ngummangaliso waphezulu onokusinceda.
U-Lazaro oNgcwele, owaziyo ukuba yintoni na ukuba ugula sisifo sokufa aze afe kwaye ehlala kwinyama yakhe ukuba luyintoni na uvuko, siyingcwele eboniswe ukuba inokusinceda kule meko.
Uyakwazi ukuba kunokubakho ukubandezeleka ngenxa yobubi bokwenyama onokuthi ukubuphelisa ubomi bethu, yiyo loo nto eba ligqwetha elifanelekileyo phambi kwetrone yasezulwini kuba esazi ukuba ummangaliso wovuko unokwenzeka.
Siya kuhamba sithandaze ngenxa yeLazaro eNgcwele yeenja kunye nezilwanyana.
Othandekayo uLazaro oMangalisayo;
Ubomi bakho bokunikezelwa kwinkonzo yeNkosi babuthathe
Ukuxabisa izinto ezincinci ebomini; Ukulunga okungcwele kaThixo kunye nenkampani yezilwanyana ezithembekileyo.
Wena ngaphezu kwakhe nawuphi na omnye ukwazi ukubaluleka kwezilwanyana zasekhaya
Ezi zihamba nathi xa siziva sisodwa, kwaye hayi entliziyweni yakhe sinokufumana kuphela uthando kunye nothando.
Isilwanyana sam sasenzakala ngoku
Kwaye nempilo ebuthathaka yiyo loo nto ke ndikubuza ngalo lonke ukholo lwam
Ngamana ungayiphilisa ngamandla akho angummangaliso.
Mamela le ndiyibuzayo kwaye ungandishiyi ndedwa phambi kwesi sicelo.
Thandaza umthandazo kaLazaro oNgcwele ngenxa yezinja ngokholo olukhulu.
Itrasti yamatyala anzima, ihlwempu y ishiyiwe okubandakanya izilwanyana, ngakumbi izinja. Lo ngumthandazo ukuba bambalwa abantu abayekayo ukutsho kwaye iyimfuneko kuba izinja zizidalwa eziphilayo ezifuna uncedo lwethu kunye nemithandazo yethu.
Baneengxaki zokugula, ukushiywa, indlala, usizi neentlungu. Zizidalwa eziphilayo ezinezinto ezinomdla kunye nezidingo zomzimba amaxesha amaninzi akukho mntu ukukhathaleleyo ukubonelela kwaye ezibenza bahlupheke.
Intanda uLazaro oyiNtanda;
Iqabane elithembekileyo likaKristu kunye nengqina enyameni
Kuwe, namhlanje, ndiyazithobela ngesicelo sakho ngalo lonke ukholo lwam
Ndicela undinike impilo, eso sipho asinakuthelekiswa nanto.
Ukuze ndibuyisele imeko ebendisoloko ndonwabela kuyo.
Uyazazi ukuba zithini iintlungu, ukugula, usizi kunye nokubandezeleka.
Uyayazi into ekuphetheyo yityhefu yesifo
Kwaye phawula iindonga kunye nobuso ukuze ufumane isiqabu.
Amagama am, sithandwa endiyithandayo, ndinyusela ezulwini
Ukucinga ngenceba, uncedo kunye novuyo.
Buthathe ezingubeni zakho undenzele into endiyifunayo.
Ngaba uwuthanda umthandazo San Lazaro kwezempilo?
Impilo ithatha izinto ezininzi kubomi bezidalwa eziphilayo, ezisusela kwizinto zokomoya kunye nezokomoya kwaye zonke zibaluleke ngokulinganayo.
Kungenxa yesi sizathu le nto lo mthandazo uba ngowona ubalulekileyo.
Kucetyiswa ukukwenza yonke imihla kwaye kusapho kwaye kungcono kakhulu kuba ukongeza ukuba ngumsebenzi wokomoya owomeleza iziseko zosapho, kusinceda ukuba sizive sikhuselekile xa kuhambo lwemihla ngemihla iSan Lázaro, unxibelelwano lwabo bonke obu bunzima, buze nabo. Banokulufumana uxolo kwaye baphumle phakathi kobunzima kunye nokulingwa.
Ngaba le ngcwele inamandla?
Impendulo ngu-ewe, imfihlelo lukholo olonyuswe kuyo phambi kwenkonzo yakho.
Yonke into esiyicelayo kuyise ukuba siyikholelwe, siyakufumana, esi sisithembiso esifumana kwi Bhayibhile eNgcwele kwaye siyenzeka ngokwenyani kuphela xa sikholelwa ukuba ikho.
Yiyo loo nto imithandazo ilukholo ngokucacileyo kwaye ingenziwa ngokwesiko.
Umthandazo owenziwe kunye nokholo unokwenza yonke into, nokuba zezona zifo zixakileyo zinokubakhona.
Thatha ithuba kumandla okuthandaza ka-Lazaro oNgcwele.